Maxaa keenay inuu fashilmo qorshahii la damacsanaa in lagu kala badasho Pierre-Emerick Aubameyang & Mauro Icardi? – Gool FM
(Yurub) 21 Luulyo 2019. Weeraryahanka Inter Milan Mauro Icardi ayaa diiday inuu ka qeyb noqdo heshiis kala badalasho ah oo dhexmara kooxdiisa iyo Arsenal isla markaana uu dhinaca kale maro Pierre-Emerick Aubameyang sida ay shaacisay Sport Mediaset.
Kabtankii hore Inter Milan ayaa laga reebay liiska ciyaartoyda kooxdiisa ee aaday kulamada fasaxa, waxaana loo sheegay inuu raadsado koox uu ku biiro, sida warbaahinta qireen wuxuu doonayaa inuu ku biiro kooxda Juventus.
Sidaas darteed, wuxuu iska diiday dhamaan dalabyada laga soo gudbiyay, isagoo kalsooni ku qaba inuu ku biiri doono kooxda marwada duqda ah dhamaadka August marka uu qiimahiisa hoos u dhaco.
Sport Mediaset ayaa fahamsan mid ka mid ah fursadahii ugu dambeeyay oo uu diido xiddiga reer Argentina iney aheyd fursad uu ugu biiri karay Arsenal, waxeyna heshiiskaas ku heli kareen kooxdiisa Aubameyang.
Napoli ayaa ka mid ah kooxaha xiiseynaya Icardi, gaar ahaan hadii lagu heli karo 60 Malyan oo Yuuro, waana kala bar lacagtii la weydiistay sanad ka hor markii ay damceen.